Tamang Samaj|Tamang|Tamang News|Portal – पूर्वबाट सुरु भयो तामाङ जागरण अभियान, ताम्सालिङ हुँदै सिंहदरबारलाई प्रहार गर्ने !
पूर्वबाट सुरु भयो तामाङ जागरण अभियान, ताम्सालिङ हुँदै सिंहदरबारलाई प्रहार गर्ने !
Mar 01, 2016 admin District news, Nepal
इलाम, माघ २३ । मञ्जुश्री सम्वत् २८५२ सोनाम ल्होछारको अवसरमा नेपाल तामाङ घेदुङले पूर्वी ताम्सालिङ जागरण अभियान सुरु गरेको छ । नेपाल तामाङ घेदुङ पूर्वाञ्चल समन्वय समिति र जिल्ला घेदुङहरुको संयुक्त व्यवस्थापनमा उक्त अभियान सुरु गरिएको हो ।
गत माघ २१ गते इलाम बजारमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत घेदुङका पूर्वाञ्चल प्रमुख मोहन गोलेले अभियानको घोषणा गरेका हुन् । पहिलो चरणमा पूर्वको ११ जिल्लामा जागरण अभियान सञ्चालन गरिने उनले बताए ।
ताम्सालिङ क्षेत्रको तामाङ जनता नउठेको कारण आफूहरुले पूर्वबाटै अभियान सुरु गर्नु परेको उनको भनाइ थियो । उनले भने– ‘हामी पूर्वबाट सुरु भएको यो अभियानलाई बिस्तारै ताम्सालिङ क्षेत्र हुँदै पश्चिमसँग जोड्छौ र सिंहदरवारलाई प्रहार गर्छौं ।’ अन्तिम धक्कामा १० लाख तामाङ जनताले सिंहदरवार घेर्ने गोलेको दाबी थियो ।
गोलेका अनुसार इलामपछि माघ २३ गते झापाको बिर्तामोड, २४ गते उदयपुरको गाईघाट, २५ गते सिराहाको गोलबजार, २६ गते सुनसरीको धरान, २८ गते धनकुटा, २९ गते तेह्रथुमको म्याङलुङ बजार, फागुन १ गते मोरङको डागीहाट, ३ गते सप्तरीको वीरेन्द्रबजार, ४ गते उदयपुरको कटारी र ७ गते खोटाङको सिम्पानीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यसपछि लगत्तै अन्य जिल्लामा दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताइएको छ ।
अभियानमा तामाङ अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष महेन्द्रजंग तामाङ, घेदुङका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङ, केन्द्रीय सचिव प्रतिक ङेसुर, काजिमान तामाङ, मोरङ जिल्ला अध्यक्ष मित्रसेन योञ्जन र संस्कृति घेदुङका कलाकारहरुसमेतको सहभागिता रहने पूर्वाञ्चल घेदुङले जनाएको छ ।
जागरण अभियानको शुभारम्भ गर्दै पूर्वाञ्चल प्रमुख गोलेले तामाङ पूर्वजहरुले बास गरेको भूमिलाई ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेश निर्माण नभएसम्म अभियान जारी राखिने बताए । तामाङसँग सत्ता नभएको कारण उत्पीडन र विभेद थोपरिएको चर्चा गर्दै उनले त्यो सत्ता ताम्सालिङ मात्रै भएको बताए ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद्का अध्यक्ष महेन्द्रजंग तामाङले ताम्सालिङको लागि १६ लाख तामाङ एकठाउँमा उभिनुपर्ने बताए ।
जबसम्म तामाङहरु एकठाउँमा आउँदैनन् त्योबेलासम्म ताम्सालिङ सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रम सुरु हुनुअघि जिल्लाका विभिन्न भागबाट आएका ताम्बा, लामा र बोम्बो झाँकीले इलाम बजार परिक्रमा गरेका थिए ।
अभियानलाई नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय सदस्य दानबहादुर तामाङ, मोरङ जिल्ला अध्यक्ष मित्रसेन योञ्जन र इलाम जिल्ला अध्यक्ष छिकिन लो तामाङ लगायतले साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
Tamang in Political, Tamangs tweet गोने ङ्ह्य र ज्ञान दिवस
एक्लाएक्लै लडेर त कसरी हुन्छ तामाङसँगै उत्पीडित जातिको मुक्ति ?
संविधान... Nov 10, 2016
बुद्धधर्म... Sep 29, 2016
छायाँमा परेका... Feb 27, 2016